အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ကျင်းပတဲ့ ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲအား ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲ အခမ်းအနား...ဓာတ်ပုံ၊ သတင်း ~ ဒီမိုဝေယံ
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ကျင်းပတဲ့ ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲအား ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲ အခမ်းအနား...ဓာတ်ပုံ၊ သတင်း
အိန္ဒိယသို့ ယတြာအလံရောက်ရှိစဉ် ကြိုဆိုကြပုံ..
လူပေါင်း ၇၀၀ ကျော်ပါဝင်ဆန္ဒပြပါဝင်ကြပါတယ်...
မေတ္တာစာတွေလည်း ဖော်ပြပါရှိပါတယ်.. ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေ...
၃၊၁၁၊၂၀၁၀ ရက်နေ့ တွင် အိန္ဒိယ နိုင်ငံရှိ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများမှ လာမည့် နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့ မှာ ကျင်းပမယ့် အတုယောင် ရွေးကောက်ပွဲကို ကျင်းပသွားမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများက ဂျန်တားမန်းတားတွင် ဆိုလိုဂမ်များ သီဆို၍ လမ်းလျှောက်ချီတက် ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်..... ထိုဆန္ဒပြပွဲတွင် လူပေါင်း (၇၀၀) ကျော် တက်ရောက် ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်....။
Honorable Prime Minister of India
New Delhi Date: 3rd November, 2010
Subject: Petition to the Government of India to Review its Policy on Burma.
Honorable Prime Minister,
We, the undersigned, India base Burmese democratic organizations are submitting this petition on the upcoming election in Burma on7November 2010 which was proposed by the military regime as an attempt to entrench and legitimize military rule, is being condemned by people around the world.
The elections will enact the 2008 Constitution, which not only contains many undemocratic measures including giving the military effective veto power over decisions made by the new parliament and government, but also depriving people of their basic human rights by stipulating “exception clauses,” and preserving draconian laws that explicitly prohibit freedom of speech, association, and assembly. Thus, this constitution is designed to keep the dictatorship in power and will not bring any new freedom to the people of Burma.
Furthermore, the election cannot be free and fair under the present situation. Democracy activists in Burma have been imprisoned, intimidated, tortured and put to death for demanding justice, peace, human rights andademocratic government. Presently, there are over 2,200 political prisoners in Burma, including Nobel Peace Laureate Aung San Suu Kyi, recipient of Jawaharlal Nehru’s Award for International Understanding, who has been under house arrest for 15 of the past 20 years and is being barred from participating in this year’s elections.
The main opposition party, the National League for Democracy (NLD) led by Daw Aung San Suu Kyi is left with no other choice under the entirely unfair election laws imposed by the military regime except to denounce this election. We, Burmese democratic organizations and activists have persistently called on the military regime to meet three benchmarks to bring about peace and stability in Burma:
1. All political prisoners, including Daw Aung San Suu Kyi, Khun Htun Oo and Min Ko Naing, must be released before the elections.
2. Inclusive dialogue with key stakeholders from democracy groups and ethnic nationalities, includingacomprehensive review of the 2008 Constitution must be convened.
3. Systematic human rights abuses and criminal hostilities against ethnic groups, political activists, journalists and civil society must be stopped.
We believe that India, being the world’s largest democracy and emerging power in the world can playacrucial role in the process of national reconciliation and restoration of democracy in Burma. We therefore strongly recommend the Government of India not to endorse and recognize Burma’s military regime’s sham constitution and elections, as it will only lead to entrenchment of military rule in the country.
We earnestly urge the Government of India and All India Congress Committee (AICC) to join with the UN and the international community in taking concrete action to secure the release of Daw Aung San Suu Kyi and ensure genuine democratic change in Burma.
We reaffirm our appreciation to the Government of India, especially for allowing hundreds of thousands of Burmese refugees to take shelter in India at this juncture while Burma is in critical conditions. At the same time we also thank the people of India who stand with the Burmese people in their struggle for peace, justice, human rights and democracy in Burma.
India base Burmese Organizations
1. Human Rights Education Institute of Burma (HREIB-India)
2. Chin Human Rights Organization (CHRO)
3. Burmese Women Union (BWU/WB)
4. All Burma Student Democratic Front (ABSDF/WB)
5. All Kachin Students & Youth
6. Burma Information Team (BIT)
7. Chin Refugee Committee (CRC) Delhi
8. Kachin National Organization (KNO/India)
10. Naga National League for Democracy (NNLD)
11. Women League of Burma (WLB/India)
12. Federation Trade Union of Burma (FTUB/India)
13. Women Rights Welfare Association (WRWAB)
14. Shwe Gas Movement
ဓာတ်ပုံများအတွက် ကိုမင်းကိုနှင့် အရှင်ထာဝရအား ကျေးဇူးတင်ပါသည်....
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အမျိုးသားဒ...
၂၇ရက်နေ့က DKBAနှင့် နအဖတိုက်ပွဲ အတွင်း နအဖမှ ပစ်လိ...
ဖိလစ်ပိုင် အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး ဟိုဆေးရီဇော် (Dr...
Eleven ဂျာနယ် အယ်ဒီတာရဲ့ Facebook ပေါ်မှ ဖြေရှင်းချ...
၉၀ နှစ်မြောက် အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ကို မျိုးချစ်စိတ...
ယနေ့ကဗျာဆရာ၊ တေးရေးဆရာ၊ ပန်းချီဆရာ (၂၀)ခန့်မှ တော...
မြန်မာ မြောက်ကိုးရီးယား ဆက်ဆံရေးနဲ့ အာဇာနည်ဗိမာန် ...
ဂျပန် TBS သတင်းဋ္ဌာနနဲ့ANN NEWS ကထုတ်လွှင့်သွားတဲ့ လူ...
သြစတြေးလျနိုင်ငံ လွှတ်တော်အမတ်များတက်ရောက်တဲ့ ဆစ်ဒန...
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ဖိတ်ြ...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ကုလသမဂ္ဂ အတွင...
ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်ကို ဧည့်ဂေဟာတခုသို့ ခေါ်ဆောင်သွား...
မိဘနဲ့တူသောအစိုးရ အပိုင်း ( ၁ ) ( ရေးသားသူ- မောင်ေ...
အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယူးဒေလီမှာ ကျင်းပတဲ့ နိုင်ငံတကာ အမျ...
စွမ်းအားမြှင့် မြန်မာကျောင်းသား စစ်သည်တော်များအဖွဲ...
မော်နီတာဂျာနယ်၊ လျှပ်တပြက်ဂျာနယ်မှ မြတ်ခိုင်နှင့် ...
CNN သတင်းဋ္ဌာနက ထုတ်လွှင့်သွားတဲ့ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်...
ဂျပန်TBS သတင်းဋ္ဌာန ကထုတ်လွှင့်သွားတဲ့ ၂၃ရက်နေ့က ဒေါ်ေ...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် သားငယ်ကို...
အဖွဲ့ချုပ်အလံ TATOO ကို ဒီဆိုင်မှာ ထိုးခဲ့တာပါတဲ့....
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သားငယ်ဖြစ်သူ ကိ...
နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ လွတ်မြောက်လာသော လူထုခေါင်းဆောင်...
ကရင်နီနဲ့ နအဖတိုက်ပွဲ (ရုပ်သံ)
မိခင်ဖြစ်သူကို ကြင်ကြင်နာနာနဲ့ ထွေးပွေ့ နှုတ်ဆက်ခဲ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နှလုံးသားပုံရိပ်များ (အပိုင်း ...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် သားငယ် ကိ...
ယနေ့ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သတင်း၊ ဓာတ...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ သားငယ် ကိုထိ...
ဘွိုင်းကောက် ဂျာနယ် (နိုဝင်ဘာလထုတ်)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ကြိုဆိုထောက်ခံပွဲ ၂၃-၁၁-၂ဝ၁ဝ...
The Voice ဂျာနယ်.. (6-51)
ရင်ထဲခံစားမိတဲ့ ၁၇ရက်နေ့က တောင်ဒဂုံက HIV/AIDS ဝေဒန...
ဂျပန်ရောက် မြန်မာဒုက္ခသည်များအား မှာကြားချက်ပါသည့် ...
၁၇ရက်နေ့က လူထုခေါင်းဆောင် သွားရောက်တွေ့ဆုံ အားပေးခ...
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှ...
၁၇ရက်နေ့က HIV ဝေဒနာရှင်များနဲ့ သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့...
မြန်မာပြည်ကလာတဲ့စာ... (တောင်ဒဂုံက မောင်ယုံရဲ့ အပီထ...
First Eleven Journalရဲ့ ၁၃ရက်နေ့ကပွဲမှာ လှလှပပ သွင...
ယနေ့ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဗဟိုတရားရု...
The Voice ဂျာနယ်.. (6-50)နှင့် (နိုဝင်ဘာ ၉ရက်နေ့ အ...
မြန်မာပြည်ကလာတဲ့စာ... (၁၄ရက်နေ့က လူထုခေါင်းဆောင်ေ...
ကိုယ့်လမ်း … ကိုယ်သွား၊ ကိုယ့်အလုပ် … ကိုယ်လုပ်၊ က...
ဂျပန်TBS သတင်းဋ္ဌာန ကထုတ်လွှင့်သွားတဲ့ အဖွဲ့ချုပ်ရုံး...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ ပထမဦးဆုံး ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ယနေ့ပြောကြားတဲ့ အသံဖိုင်(၁) (၂)...
Russia Today သတင်းဋ္ဌာနက ထုတ်လွှင့်တဲ့ လူထုခေါင်းဆောင...
ဒီနေ့တော့ အမေရဲ့ ပုံရိပ်တွေ ဝေဝေဆာဆာနဲ့ ကျွန်တော့်...
ဂျပန်TBS သတင်းဋ္ဌာန ကထုတ်လွှင့်သွားတဲ့ လူထုခေါင်းဆောင...
နေအိမ်ခြံဝင်းရှေ့မှာ မြင်တွေ့ရတဲ့ ကျွန်တော်တို့ လူ...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လုံးဝလွတ်မြောက်...
သောကြာနေ့ညက လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ...
DKBA မှ ဖမ်းဆီးပြီး ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့သည့် ဗိုလ်ကြီးသ...
သောကြာနေ့ ရွှေဂုံတိုင် အဖွဲ့ချုပ်ရုံးရှေ့မြင်ကွင်းမ...
WHO MADE WHO w/ GENERATION WAVE : "LEFT HAND OF TH...
News Eleven ဂျာနယ်မှာ ပါပြီးမှ ပြန်ဖြုတ်ခံလိုက်ရတဲ...
အလုံမြို့နယ်က မဲရုံတွေမှာ မည်သူမျှပေးမဝင်ပဲ အလုံပိ...
အိန္ဒိယမှာ ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရန်(၂...
မဲဆောက်ဘက်မှ ရိုက်ကူးထားတဲ မြဝတီဘက်ကမ်း မြင်ကွင်း ...
လတ်တလောရရှိထားတဲ့ မြဝတီမြို့က ပုံတစ်ချို့ပါ..(ဓာတ်...
မဲဆောက်မြို့တွင်း မြန်မာဘက်မှ ဗုံးဆံများ ကျရောက်ရာ...
လက်ရှိ မြဝတီအခြအနေနဲ့ ဆက်စပ်သတင်းများ နိုဝင်ဘာလ ၉ရ...
လူထု တိုက်ပွဲကို သစ္စာလက်နက်များ တပ်ဆင်ခြင်း (ဗမာ့ေ...
ABC သတင်းဋ္ဌာနက ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့.. မြန်မာပြည်ရွေးကောက...
မြဝတီ မဲဆောက်တံတား မြဝတီဘက်အခြမ်း ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်....
မဲဆောက်သို့ တိမ်းရှောင်လာတဲ့ မြဝတီမြို့ခံများ.... ...
AlJazeera သတင်းဋ္ဌာနက ထုတ်လွှင့်သွားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲေ...
ရွေးကောက်ပွဲ မဲအနိုင်အရှုံး စာရင်း (၂)
ရွေးကောက်ပွဲ မဲအနိုင်အရှုံး စာရင်း (၁)
နောက်ဆုံး ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်ရ မြဝတီသတင်းများ....
ယနေ့ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ မြန်မာစစ်အခွန်ရုံးရှေ့မှာ နအဖ...
ယနေ့ *ဂျပန်TBS သတင်းဋ္ဌာနက ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် မယ်ဆို...
နအဖ ဝါဒဖြန့် အွန်လိုင်း သတင်းစာ. ကြေးမုံအွန်လုံး အ...
ရင်ထဲကဆန္ဒမှန်တွေကို ဖော်ထုတ်ပြသခဲ့တဲ့ ၁၉၉၀ခုနှစ်ရေ...
" ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နှလုံးသား ပုံရိပ်များ-အပိုင်...
နအဖ ဝါဒဖြန့် သတင်းစာပါ... လေကြောင်းလိုင်း မှားယွင်...
ဂျပန်TBS သတင်းဋ္ဌာန ကထုတ်လွှင့်သွားတဲ့ (၇)ရက်နေ့မှာ က...
AlJazeera သတင်းဋ္ဌာနက ထုတ်လွှင့်သွားတဲ့ မြန်မာရွေးကော...